ला टेम्परेन्स (२०१ 2015), मारिया दुडियास द्वारा तेस्रो उपन्यास। | वर्तमान साहित्य
ला टेम्प्लान्जा (२०१ 2015) स्पेनिश लेखक मारिया ड्युडास द्वारा लिखित उपन्यास हो। उनी late० बर्ष भन्दा बढी उमेरको साथ साहित्यिक जीवन शुरू गरेपछि उनी "ढिलो लेखक" मानिन्छ। तपाईंको पहिलो, Seams बीचको समय (२००)) लाखौं प्रतिलिपिहरू बेच्यो र केहि तीस भाषाहरूमा अनुवाद गरियो। अनिवार्य रूपमा, उसका सबै पछिका कार्यहरू उनको पहिलो तुलनासँग तुलना गरिएको छ।
ती लेखकहरूको लागि जसको लक्ष्य दीर्घकालीन क्यारियर विकास गर्नु हो - एक भन्दा बढी पुस्तकहरू - यो समस्या हुन सक्छ। यद्यपि, पहिलो सब भन्दा बेच्ने पुस्तक पाउनुले मानसिक शान्तिको प्रशंसनीय प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको अर्थ "लेख्नबाट बाँच्न सक्षम हुनु" (र जीवनको राम्रो गुणको साथ) हुनु हो। यसैले, ड्युडासको लागि आज वास्तविक चुनौती भनेको आफूलाई उछिनेर हो।
1 लेखकको बारेमा: मारिया डाउडास
1.1 पहिलो मान्यता
1.2 कप्तानका छोरीहरू
1.3 कथाहरू अनुयायीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न?
2 तापमान: मेक्सिको, हवाना, जेरेज डे ला फ्रन्टेरा
2.1 प्लट: विजय ... र पार गर्ने कथा
3 विश्लेषण र कामको समीक्षा
3.1 "अन्य" वर्णहरू
3.2 ला तापमानको संवेदी यात्रा
3.3 तापक्रम, "ढिलो गति" मा एक उपन्यास?
लेखकको बारेमा: मारिया डाउडास
ड्युडासको जन्म १ 1964 .XNUMX मा स्पेनको मध्य क्षेत्रको कास्टिल्ला-ला मञ्चाको शहर पियुर्टोलानोमा भएको थियो। उनी अंग्रेजी दर्शनशास्त्रमा डाक्टर हुन्, मर्सिया विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे, जहाँ उनी लेटर संकायमा पूर्ण प्राध्यापक हुन्। वास्तवमा, प्रकाशन विश्वमा प्रवेश गरेदेखि कक्षाकोठामा थोरै समय मात्र आएको छ।
अब, उनले नियमित रूपमा लेख्नुपर्दैन, उनी पनि उपस्थित हुनुपर्छ र प्रेस सम्मेलन, पुस्तक मेला, हस्ताक्षर अटोग्राफ मा उपस्थित हुनुपर्छ ... २०० In मा यो बिक्रीमा गयो Seams बीचको समय, एक ऐतिहासिक उपन्यास सेट गरियो जुन स्पेनिश गृहयुद्धको समयमा सेट भयो। वास्तविक विवरण र गद्यले भरिएको छ कि तुरुन्तै स्पेनिशभाषी पाठकहरूलाई मोहित गर्‍यो।
ड्युडासले आफ्नो सूक्ष्म र नाजुक शैलीलाई जर्मन वा अंग्रेजी जस्ता धेरै "देहात" भाषाहरूमा संरक्षण गर्न व्यवस्थित गरे। Seams बीचको समय यो उनको लेखकको रूपमा भर्खरै अभिलेखमा पहिलो मान्यता हो। २०१० मा, यसले उनलाई ऐतिहासिक उपन्यासहरूको लागि शहरको कार्टाजेना पुरस्कार कमायो। पछि, उनले म्याड्रिडको कम्युनिटी अफ कल्चर अवार्ड, साहित्य श्रेणी, २०११ मा प्राप्त गरे।
उनको दोस्रो उपन्यास पनि बार धेरै उच्च सेट, मिसन बिर्सनुहोस् (२०१२), यद्यपि यो अर्को सर्वश्रेष्ठ विक्रेता हो, यसका पाठकहरूको ठूलो संख्यामा निराश भए। केवल पाठकहरू जसले पहिलो पटक सिरा क्विरोगा (पहिलो उपन्यासको नायक) को साहसिक कार्यहरू जान्दैनथे उनीहरू यस कथाबाट सन्तुष्ट भए।। युवा ड्रेसमेकरले छोडेको वेक धेरै शक्तिशाली हुनु अघि मैड्रिड छोड्न बाध्य भएको थियो।
२०१ 2018 मा यो पुस्तक पसलमा पुगेको थियो कप्तानका छोरीहरू. आलोचकहरूका लागि यसको अर्थ डाउडासको लागि "प्रशंसक" को साथ स्पष्टतया अन्तिम मेलमिलाप हो। एक प्रक्रिया तीन बर्ष पहिले शुरू भयो टेम्पेस्ट। दुबै प्रकाशनहरूले आजको अक्षरहरूको संसारमा धेरै उत्सुक अवस्थाको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।
यो एक प्रकारको हो "तारा प्रणाली", जसले हलिउड र यसको सिनेमामा ठूलो समानताहरू साझा गर्दछ। वा अझ बढि, नेटफ्लिक्स र यसको श्रृंखलाको। क्रोधित र निराश फ्यानहरू जताततै, सोशल मिडियामा (मुख्यतया फेसबुक) र वेब फोरमहरूमा निरन्तर गुनासोहरूको साथ।
कथाहरू अनुयायीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न?
तत्काल सफलता अचम्मको कुरा होइन जब यो अल्पकालीन पनि हुन्छ। यो मारिया डाउडासको मामला होइन। स्पेनिशले "समकालीन उपन्यास" को रूपमा एक निश्चित क्षेत्र द्वारा बप्तिस्मा लिएको एक subgenre को लेखक बीच आफ्नो ठाउँ कमाएको छ। त्यसकारण, जे भए पनि Seams बीचको समय उनको प्रमुख कार्यको रूपमा जारी रहन्छ, उहाँ एक पुस्तक लेखक हुनुहुन्न।
ला टेम्प्लान्जा: मेक्सिको, हवाना, जेरेज डे ला फ्रन्टेरा
तपाईं यहाँ पुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ: ला टेम्प्लान्जा
तीन स्पष्ट भिन्न भिन्न क्षणहरू। तीन क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा एक अर्कासँग भिन्न छन्, तर साझा भाषाको बाहिर धेरैमा साझा। उपन्यासको पहिलो क्षणहरू स्पष्ट दृश्यहरूमा पहिलो नजरमा देखा पर्दछ: प्रेम, विश्वासघात, त्रासदी र लोभ। तर कथामा दुई अध्यायहरू विस्तार गरेपछि कथानकको गहिराई स्पष्ट हुन्छ।
माथी माथी तिनीहरूको पात्रहरूको ड्यूडास द्वारा बनाइएको निर्माणलाई धन्यवाद छ: त्रिमितीय, परिवर्तन गर्दै (र अप्रत्याशित, अन्ततः)। धेरै तहहरूको साथ जुन म्यानचिअन विचारबाट टाढा राखिएको वा परिस्थिति अनुसार हटाइएको छ। सबैले एक शब्दमा यसको मुख्य पात्रहरू सारांशमा: मानव।
प्लट: विजय ... र पार गर्ने कथा
सतह मा (यस शब्द को उपयोग मा कुनै pejorative अभिप्राय बिना), एक कठोर, कडा परिश्रम गर्ने र महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मौरो लरियाको कथा हो: जसलाई एक पटक मात्र होइन, तर दुई पटक सबैभन्दा खराब विपत्तिहरू पार गर्न बाध्य पारिएको छ। "प्रेम रुचि" Soledad Montalvo नाम बाट प्रकट हुन्छ। नायिका "जुत्ताको अन्तिम" को रूपमा समायोजित एक महिला।
उनी बाटोको हरेक पाइलालाई आदेश दिन र अर्को चालहरूको आशा गर्न सक्षम छ। यो यी दुई पात्रहरू बीच छ - आवश्यक रूपमा एक प्रमुख चरित्रको - कथाको थोकको परिचालन तनावलाई जारी गरिएको छ। दृढ संकल्प र वफादारी जस्ता मानहरू बारम्बार परीक्षणमा राखिन्छ। तप केवल एक मात्र संदर्भ मात्र हो।
विश्लेषण र कामको समीक्षा
ठाउँहरू मुख्य पात्रहरू हुन्। मरुभूमि बेनिटो जुरेजको अध्यक्षतामा उत्तरी मेक्सिकोका खानीहरु। ला हबाना, उदार र अनजाने स्वतन्त्रता खोजी वा गुलामी समाप्त संग सम्बन्धित कुनै विचार अस्वीकार। Jerez, १ th औं शताब्दीमा स्पेनको लगभग सबै अमेरिकी उपनिवेशहरूको हानीको कारण भएको आर्थिक रक्तस्राव जोगिनका लागि केहि शहरहरू मध्ये एक।
यी अन्य पात्रहरू हुन् जसले पक्ष लिन्छन् ला टेम्प्लान्जा. मारिया ड्युडेस, जब उनी आफ्नो ढिलो र नाजुक गद्यको विकास गर्छिन्, यी तीन क्षेत्रहरूको वर्णन गर्न कुनै विवरणहरू बचत हुँदैन। यसले ती प्रत्येक क्षणमा भएका ऐतिहासिक क्षणहरूको पनि छानबिन गर्छ।
संवेदी यात्रा ला टेम्प्लान्जा
दर्शकहरू आफैंले भोगेका भोग्नुपर्ने विलासिता र विलासिता आफैले महसुस गर्छन्। दृश्य भ्रमणका साथै मारिया डाउडासको उदात्तीकरण मेरिट ला टेम्प्लान्जा यो पाठक मा एक ज्वलन्त ध्वनि, घ्राण र लोभ यात्रा को लागी गरिएको छ।
ला टेम्प्लान्जा, "ढिलो गति" मा एक उपन्यास?
तापमान यो घटनाहरूको एक बिस्तारै उल्टो कहानी संग कहानी हो। यस हदसम्म कि केही पाठकहरू बोर र निराश हुन्छन्, कथालाई पहिलो हाफमा त्याग्न कटिबद्ध छ। तर एक पटक यसको चरित्र क्यारिबियन (पहिलो) को लागी एटलान्टिक पार गर्न पछि (पछि) यात्रा गरे, यस कथानक अन्त सम्म एक उन्माद गति हासिल गर्दछ।
थोरै धैर्यताले गर्दा ड्युडासको गद्यको आनन्द लिन दुख हुँदैन। यो शान्तपूर्वक बचाउनको लागि निर्माण गरिएको हो। ट्विटर वा इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट तत्काल आत्मसम्मानको प्रचार बिना। तपाईंले यसको मजा लिन पर्याप्त समय लिनु पर्छ। सबै भन्दा पछि, जूलियो कोर्टिजारले भने जस्तै, "उपन्यास सँधै बिन्दुहरूद्वारा जित्दछ" ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » ला टेम्प्लान्जा
पीटर Ustinov, एक अभिनेता भन्दा अधिक। उनका पुस्तकहरू र कार्यहरू